Kabalii barataa, ajajawwan mara Herregduu LibreOffice waliin hojeetu of keessaa qaba. Tarree ogeejjiiwwan jiran mara, akkasuumas ajajawwan galmeewwan foormulaa gulaaluu, mul'annoo, qindeessuu, dhangeessuu, maxxansuu fi wantawwan isaan keessatti hamataman of keessaa qabu. Ajajawwanii bafata hedduun, yammuu foormulaa tokko uumtuu yk gulaaltu qofa mul'atu.
Bafatii kun ajajawwan foormulaa dhangeessuuf barbaachisan of keessaa qaba.
Bafata Foddaa keessaa, foddaa haaraa tokko bantee tarree galmee ilaaluu nidandeessa.